Abaalmarinta Caddaaladda - Argagixisnimo Loo Raadinayo - Abubakar Shekau
Abubakar Shekau waa hoggaamiyaha Jama’atu Ahl as-Sunnah il-Da’awati wal-Jihad, inta badanna loo yaqaan Boko Haram. Boko Haram, kaasoo ay micnaheedu tahay “tacliinta reer Galbeedka waa mamnuuc,” waa urur argagaxiso oo Nigeria salkeedu yahay oo dooneysa in ay xukunka ka tuurto dowladda Nigeria oo ayna ku badesho maamul ku dhisan sharciga Islaamka. Kooxda qaabab kala duwan ayay u sameysnaayeen tan iyo dhammaadka 1990 yadii. Waxaa jira warbixinno sheegaya in wada-hadallo, tababarro, iyo hub ay isweydaarsadeen Boko Haram, al-Qaacidada Dhulka Islaamka ee Galbeeda (AQIM), al-Shabaab iyo al-Qaacidada joogta Carabiyada, kaasoo adkeynaya quwada ay Boko Haram ku fulineyso weerarada argagaxisada.
Shekau wuxuu horey u ahaa taliyaha labaad ee kooxda. Bisha Luulyo 2010, Shekau si waadax ah ayuu usheegtey hoggaanka Boko Haram oo wuxuu ku hanjibey in weerarayo danaha reer Galbeedka ee Nigeria. Isla dhammaadka bishaas, Shekau wuxuu soo saarey bayaan labaad oo uu ku muujiyay midnimada ay la yeesheen al-Qaacida iyo hanjaabadyo Mareykanka ku aaddan. Inta Shekau uu hoggaanka u hayay, awoodda howl-gelinta Boko Haram way sii kortey.
Kooxda qaraxoodii kowaad ee ay ku fuliyeen miino macmal ah (IED) waxa ay ahayd bisha Juun 2011 dhexdeeda, oo tan iyo ilaa markaas way sii kordhiyeen weerarada IED ee ay u isticmaaleen ee ay ku beegsadeen meelo fudad. Weerarka gaariga bamka laga soo buuxiyay ee bisha Agoosto, 2011 lagu qaadey xurent Qaramada Middoobey ee Abuja, Nigeria ayaa ahaa sumaddii koowaad ee ay kooxda howl-galo lid ku ah danaha reer Galbeedka ay ku qaadaan. Ugu yaraan 23 qof ayaa lagu diley, oo in ka badan 80 qofna lagu dhaawacay, weerarka. Waxaa sheegtey af-hayeenka Boko Haram oo qirtey mas’uuliyadda weerarka oona balan ku qaadey in mustaqbalkana ay bartilmaameedsan doonaa danaha dowlada Nigeria iyo tan Mareykanka.
1 bisha Maajo, 2012, in ka yar hal todobaad ka dib markii ay kooxdu qarxisey dhismaha jornaalka Nigerian ee Abuja ku yaaley, Boko Haram bayaan ayay waxay ku soo gudbisey fiidiyow iyagoo ku hanjabao weeraro dheerad ah oo ay ku qaadayaan jornaalada wararka ee caalamamiga iyo kuwa maxalliga, oo uu ku jiro wariyayaasha Codka Mareykanka (Voice of America) iyo Sahara, adeeg warbaahin oo uu fadhigoodu yahay magaaladda New York.
Intii uu hoggaanka Boko Haram hayey Shekau waxay si joogto ah u bartilmaansadeen carruurta da’da yar. Markay ahayd Abriil 14, 2014, Boko Haram waxay iskuu ku yaalla waqooyiga Nayjeeriya ka afduubeen ku dhowaad 300 oo gabdhood. Farriin fiidiyowga laga sii daayey saddex toddobaad ka dib, ayuu Shekau ku sheegtay in uu mas’uul ka yahay afduubka, isagoo gabdhahana ku sheegay in ay addoomo u yihiin wuxuuna ku hanjabay in uu suuqa ku iibin doono.
21 bisha Juun, 2012, Waaxda Arrimaha Dibadda ee Mareykanka waxay ku magacowdey in Shekau uu yahay Argaggaxsada Caalamka Gaarka ee ku Magacaaban Amarka Dowliga ee 13224.
Taariikhda Dhalashada: 1965,1969, 1975
Goobta Dhalashada: Yobe, Nigeria
Dhismaha Jidhka: Caato (dhuuban)
Luqadaha: Carabi, Hausa, Fulani, Kanuri
Magacyada La Sheegto: Abu Bakr Skikwa, Imam Abu Bakr Shiku, Abu Muhammad Abu Bakr Bin Muhammad Al Shakwi Al Muslimi Bishku, Abubakar Shakkau